Cilmi-baarista Xoolaha Iskaashatada
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan shaqada ay taageerto CCRP, booqo CCRP.org
Ujeeddada Barnaamijka: Hagaajinta helitaanka cuntada maxaliga ah, ee joogtada ah, nafaqo leh iyada oo la adeegsanayo cilmi-baaris ku salaysan iyo wadaag aqooneed oo ay la leeyihiin beeraleyda yaryar, hay'adaha cilmi-baarista, iyo ururada horumarinta.
Barnaamijka Cilmi baarista Dalagyada (CCRP) wuxuu u shaqeeyaa si loo hubiyo adduunyo halka ay dhammaantood ka heli karaan cunto nafaqo leh oo ay si joogto ah u soo saaraan dadka maxalliga ah. Waxaan tan ku samaynaa annaga oo iska kaashanayna nidaamyada cilmi-baarista hab-beero-baarista iyo wadaagga aqoonta oo xoojinaya awoodda beeraleyda yar-yar, machadyada cilmi-baarista, iyo ururada horumarinta. Waxaan qaadeynaa qaab guud, hab bey'ada deegaanka beero, taageerista cilmi baarista iyo iskaashatada u horseeda kordhinta waxsoosaarka dalaga, habnololeedka hagaagsan, nafaqo wanaagsan, iyo kordhinta sinnaanta. Waxaan xooga saareynaa kaalmadeena laba iyo toban dal oo ku kala yaal laba qaaradood oo saboolnimo iyo cunno yari ay ka abuureen “dhibco kulul oo gaajo ah.”
Tan iyo markii la aasaasay barnaamijkii 1983, McKnight Foundation wuxuu qabtay in ka badan $ 100 million CCRP, oo ay ku jiraan ballanqaadka hore iyo kan mustaqbalka iyo kaalmada aan kaalmada ahayn, sida taageerida shirarka. Guud ahaan, in ka badan $ 74 milyan ayaa loo ansixiyay deeqaha si ay u taageeraan himilada barnaamijka.
Fadlan ogow: CCRP waxay leedahay nidaam codsi oo xiran oo leh wicitaano isdaba joog ah oo loogu talagalay qoraallada fikradaha. Codsiyada maalgelinta waxaa laga aqbalaa oo kaliya ururada lagu martiqaaday inay codsadaan ama ka jawaabaan wicitaan la beegsaday.
Tusaalooyinka mashruuca, xogta cilmi baarista, iyo ilaha kale, booqo bogga internetka ee aqoonta khadka aqoonta ee Barnaamijka Cilmi Baarista ee Wadashaqaynta.
Barnaamijka Cilmi Baarista Iskaashatada
Deeq Bixinta 2020
[cinwaanka emailka ilaalinaya]
Barnaamijka iyo Xiriiriyaha deeqaha